दलित’ भएकोले जागिरबाट निकालियो ! रुँदै भनिन : मैले तताएको पानी समेत खाएनन - Maxon Khabar
Home / News / दलित’ भएकोले जागिरबाट निकालियो ! रुँदै भनिन : मैले तताएको पानी समेत खाएनन
दलित’ भएकोले जागिरबाट निकालियो ! रुँदै भनिन : मैले तताएको पानी समेत खाएनन
असार १९ खोटाङ
दिक्तेल, रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलस्थित सरस्वती आवासीय विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी बिन्दा विश्वकर्माले आफूलाई दलित भएकै कारण जागिरबाट निकालेको भन्दै कारबाहीको माग गरेकी छन ।
बिगत लामो समयदेखि सो विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीको काम गर्दै आएकी विश्वकर्मालाई गत जेठ २७ गतेबाट हटाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । प्रअ रोशन ढकाल र सहायक प्रअ ललितकुमार बस्नेतले आफूलाई दलित भएकै कारण जबर्जस्ती जागिरबाट निकालेको उनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बबि चाम्लिङ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेलसमक्ष उनले ‘उहाँहरू दुवैलाई जातीय विभेदसम्बन्धी कारबाही कारबाहीको माग राखेकी हुन । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ रोशन सर र ललित सरले मैले पकाएको चिया र तातो पानीसमेत खानुहुन्नथ्यो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख चाम्लिङले दुवै पक्षलाई राखेर समस्या समाधान गर्ने बताए । ‘विश्वकर्मा माथि जातीय विभेद र जालसाजी दुवै भएको देखिन्छ’ सुरेन्द्रराज पौडेलले भने, ‘घटना एकदमै गम्भीर भएकाले थप अनुसन्धान गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा छौं ।
विश्वकर्मालाई हटाएलगत्तै उनको ठाउँमा विद्यालयले अर्को व्यक्ति नियुक्त गरेको पाइएको छ । आफूलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई राखेको थाहा पाएपछि विद्यालयमा बुझ्न जाँदा उल्टै हप्काएर पठाएको उनले बताइन ।
सागर आले को एकतर्फी माया "भावनाका शब्द" सार्बजनिक (हेर्नुस् भिडियो )
Watch This Video Also :